2020.01.19 Fivoriana isan-taona
Fivoriana Fanao Isan-taona Tamin'ny Janoary. 2020. Manana ny fety isan-taona ao Shijiazhuang ny birao, mamintina sy mitatitra ny asan'ny taona manontolo, midera ny olona mandroso sy ny ekipa. Fametrahana tanjona ho an'ny taona manaraka.
2019.10.02 Fampirantiana Edifica
Fampirantiana Edifica Tamin'ny Oct.2nd-5th, 2019. Nanatrika ny fampiratiana EDIFICA tany Chili i Hebei copihue.
2019.05.14 Fidiran'ny orinasa
Factory Vist Tamin'ny Mey.14th, 2019. Nitsidika orinasa tany ny orinasa rahalahinay tany Chili.
2017.10.11 Fidiran'ny orinasa
Factory Vist Tamin'ny Oktobra 11, 2017. Nitsidika ny orinasa ny mpanjifa any Indonezia ary nanao sonia fifanarahana iray.
Ny vokatra miaro ny tontolo iainana no ho filamatra
Ny indostrian'ny rano mikosoka rano dia hamolavola haingana, ny vokatra miaro ny tontolo iainana no ho lehibe. Ny palitao nentim-paharazana dia misy fiatraikany lehibe amin'ny tontolo atmosfera sy ny fahasalaman'ny olombelona. Ny loko vita amin'ny nentim-paharazana dia mampiasa solvents organika ho toy ny diluents ary misy ambaratonga avo lenta amin'ny com organik miisa ...
Inona ny coating Powder?
Ny coating coating dia karazana coating izay ampiharina toy ny vovoka maina maimaimpoana. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny loko loko mahazatra sy ny takelaka vovoka dia ny lozisin'ny vovoka dia tsy mitaky solventy hitana ny fatorana sy ny famenoana amin'ny endrika fampiatoana rano. Ny coating dia karazana ...
2017.09.05 Fitsidihan'ny orinasa
Factory Vist Amin'ny Sep.5th, 2017. Atoa Samaranch Ⅲ (Zafikelin'i Juan Antonio Samaranch Torelló) dia nitsidika orinasa ary nianatra ny vokatra mba hiresaka momba ny fiaraha-miasa any Eropa. ...